Ukuze ukukhulisa amanzi ukujula umxhwele futhi ukondla it ohlelweni ngaphansi kwengcindezi, kubalulekile ukusebenzisa imishini ekhethekile okuyinto operable ngaphansi kwezimo ezinzima. Lezi amadivayisi zihlanganisa amaphampu downhole, okumele libe amandla kanye nekhono ibhekane uketshezi ingcindezi.
Kodwa le mibandela ikhona Akuwona kuphela ukuthi kumele athobele ukuze kuzuzwe umphumela omuhle isikhathi eside. Kubalulekile, isibonelo, qinisekisa ukuthi okuqukethwe isihlabathi ketshezi akhishwa akuyona liphezulu kakhulu. Nokho, emakethe ungathola amamodeli akuzona ngakho nozwelo izinga imvelo.
ukumpompa khetha Properties
Phakathi izici eyinhloko imishini ukudonsa kufanele abelwe ukuvuza, ngoba medium akhishwa akufanele nabo electronics. Njengoba esinye sezici eziyinhloko zalamaqembu.I kuyadingeka ukwaba ngaphezulu futhi waba nokwethenjelwa, ngoba operation zazo akumele kuhambisane isidingo ukulungiswa njalo kakhulu. Lezi zimfanelo imishini Aquario. futha Downhole isibonelo esihle kakhulu salokhu.
Pumps Aquario, nomakhi esemgwaqweni e-Italy, kwakunabamemezeli abangu-cishe abangu-8 edlule emakethe Russian. Le nkathi kwaba okwanele ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo umise ngokwaso phakathi abathengi. Ngokuvamile, Aquario inkampani kuyinto umkhiqizi ngamazwe, ogama izitshalo zitholakala ku:
Inkampani ekugcineni bakwazi ukwakha imikhiqizo zinezikhathi ukusebenza oluvelele, intengo okungabizi nokwethembeka. Aquario - amaphampu, ukubuyekezwa mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ungafunda kulesi sihloko siyazi imishini nge high. Nokho, isikhathi nokuphila komkhiqizo kuyadingeka ukuqinisekisa ukuthi uketshezi akhishwa ayiqukethe esiningi ngokweqile isihlabathi. Ukuze operation evamile, okuqukethwe kwayo akumele kube ngaphezu kuka-120 amagremu ngamunye imitha cubic.
Uma ungumnikazi we kahle, ungakhetha ukuthi siphakamise amanzi amaphampu wakhe ngaphansi brand Aquario. Nokho, kumelwe sizinake ukujula ububanzi we kahle ukuze ukhethe imingcele efanele. Wathi nomkhiqizi inikeza ukudayiswa eziningana uzotshala imishini ezahlukeneyo, ngalinye elikwazi senzelwe ubukhulu kuchazwe kahle.
Leyo mikhumbi zinezikhathi iqoqo elithile kanye nokusebenza. Ngokwesibonelo, imishini ASP 1,5S, ububanzi 3 amayintshi, eyenzelwe imithombo emincane kwemigomo 80 mm. Ukusebenza kwalesi apharathasi 50 amalitha / imiz. Iyunithi lingasethwa amandla athile injini, esinikela ingcindezi kusuka 50 kuya 100 m. Idivayisi amanzi esibukweni kungenziwa egxilile a ka 20 ukujula 30 m.
Uma unesithakazelo imishini ngaphansi brand Aquario, ASP 1c futha angabhekwa. It has a ububanzi okuyinto ilingana 3.5 amayintshi. I izici zale divayisi zifana labo possessed apharathasi ngenhla. Nokho, lolu phiko akuyona njengoba nozwelo izinga medium akhishwa. I ububanzi luyanda 4 amayintshi, uma ngaphambi ASP 3B brand futha. Kuyinto imishini okuyinto ethandwa kakhulu phakathi kwabanye, ngoba imithombo nabendlu ngokuvamile kufanele ububanzi 100 mm. Ukusebenza lamahubo lilingana, kodwa imishini ngokwayo qinile kanjalo uyakwazi ukwanelisa uketshezi ukuphakama 130 m nokuningi.
Ngokuthenga ukuhlelwa enjalo, ungakwazi ukuthatha ithuba ufunde imiyalelo, okuyizinto nemingcele lobuchwepheshe. Abonisa ukuthi imishini idinga futhi kwemigomo umthombo. Nge lolu lwazi, uzokwazi ukusetha futha abo, bese benza uxhumano.
Izibuyekezo kokwakhiwa Aquario amaphampu
Aquario - futha, okuyinto, ngokubona abathengi izici design oluvelele. Ngokwesibonelo, nesicu salo is ezenziwe ngensimbi engagqwali, kodwa ngesisekelo ipayipi itheku futhi ikhava motor senziwa zethusi. Motor ifakiwe esigabeni ukukhiqizwa ulwelwesi nokunwebeka elikwaziyo iwukudambisa ingcindezi zangaphakathi nezangaphandle. izinjini ezinjalo Rotor ezimanzi.
Uma ufuna ukulondoloza imali, abathengi belulekwa ukuba banake izinto, okuyinto ekhona incwadi wokugubha E. Lokhu kubonisa ukuthi idivayisi phambi kwakho, lapho itheku is ezensimbi nickel-kuhlinzwa. izingxenye ezibalulekile lapho ukusebenza kuthiwa baxhumane ngamanzi, njengoba eligcizelelwa abathengi, zenziwe kusukela amapulasitiki okuhlala. Basuke luqiniswe ifaka steel. izinga nangokuvikela izinto okokuvikela injini, okuyinto zivumelana isigaba okusezingeni eliphezulu F.
Aquario - futha, okujwayeleke idivayisi multistage centrifugal. Kusukela amazwi abathengi, izigaba ngaphezulu, ingcindezi more kuzoqinisekisa iyunithi. Nokho, ukudayiswa, futhi ingabhekana embodiments isikulufa. Lokhu kufanele kubandakanye ASP imodeli (ST) 1/40 - 250.
Uhlolojikelele imodeli futha AMH-60-4P
Pump Aquario AMH 60 4P libhekisela ukuvundulula futha multistage okuyinto ngesikhatsi operation ahlelwe nendawo. imishini ezisetshenzisiwe for uzotshala uketshezi msulwa:
I yamanzi nesenzakalo ukujula akufanele bube ngaphezu kuka-7.5 m. Idivayisi usebenza umsindo ezingeni eliphansi, Nokho-ke kungenziwa isethwe ngisho yokuhlala. Isikhawu isilinganiso ukusebenza zokhahlamba kusuka amalitha ngomzuzu-10 kuya ku-50. Umkhawulo ukuncela height 8 m. Uma kwenzeka ingcindezi esiphezulu akumele kube ngaphezu kuka-6 ibha. Aquario AMH Lezi amaphampu eziqhutshwa ezingeni lokushisa medium ukudonsa ku ezahlukene +1 +40 ° C. I lokushisa imvelo bangaphandle luyehluka in the ububanzi efanayo.
Pump Uhlolojikelele brand AMH-125-6S
Pump 6s Aquario AMH 125 has a motor okuyinto selehlile nge uhlelo emoyeni. I injector kanye diffuser zenziwa we technopolymer. Njengoba stator izinkampani esetshenziswa ngokuphelele zethusi. Rotor kanye nengaphakathi stator zenziwa kagesi abandayo iphuma steel. Insimbi engagqwali oluyisisekelo oluthi futha.
Uma unquma ukuthenga Aquario brand futha, udinga silazi kangcono izici of ukufakwa. Kubalulekile ukuba acabangele ukuthi ububanzi we Borehole kufanele ibe inkulu kunenombolo ububanzi we futha kanye ikhebula. Ukuxhumeka amapayipi kufanele kube okunokwethenjelwa futhi babekwa uphawu. Isisetshenziswa sehliswe neketanga noma ikhebula, okuyinto ziyaqiniswa eyelets idivayisi. Kubalulekile ngaphandle ukuthi kungenzeka umonakalo ikhebula kagesi uma ufaka iyunithi.
Wedge esangweni valve for amapayipi
Chimney wokuhlanza izandla zabo. Okukushoyo yokuhlanza flue
Ukuphuca ithuluzi for machining metal
Amanzi ligeleze futha, ukuze kubhayela igesi: kudivayisi wesifunda
Chakras - isikhali yasendulo Indian: incazelo, izici kanye nomlando
Izimonyo & Beauty
Supermassive Black Hole esikhungweni kuyi-Milky Way. Supermassive Black Hole in the OJ 287 Quasar
Kungani nomchamo pink ngemuva beetroot?
Wamafutha "leanin" - yokusetshenziswa, ukwakheka, analogs kanye nokubuyekeza
Toxoplasmosis: kuyini? Izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa isifo
Kusukela sizogqokani ihembe coral? Inhlanganisela izingubo coral-enombala
Biography Katie Starshova - izinkinobho kusuka uchungechunge oluthi "Ndodakazi Lobaba"